Ny afindrafindrao tsy azo avela (updated) | Ny androaniko
[Hira ] 05 Janoary, 2017 15:31
Ny afindrafindrao tsy azo avela (updated)
Somary ningitrika blaogy kely aho tato ho ato fa variana mamahana ny "klipgasy.org" izay azonareo handaniana andro hakana fafiny ny vazo malagasy rehefa mba milamindamina iny ianareo. Natao maivana tsy be sasiny ilay izy ao. Avy ao amin'ny lisitry ny mpihira no hitako lalàna haingana hitadiavanao hira, fa raha hainao moa ny lohateny dia vao maika tsara.
Mbola be ny tiako ambara momba ny fivoaran'ny hira malagasy, tena manaraka toetr'andro tokoa. Efa manangona ny hevitra nivoitra tamin'ity lahasa iray noraisina tamin'i sefo ity aho ka mbola ho avy hitondra izay zavatra voamariko, fa tsoriko fa dia variana mihitsy aho ao.
Fa androany dia miompana amin'ny afindrafindrao aloha ny resako. Dihy tsy mety ho lefy laza fa mbola voatanantsika tsara hatraty amin'ny taona roa arivo ny afindrafindrao, na any an-tanindrazana na aty ivelany. Tsy misy fetin'ny Malagasy ka tsy sokafana amin'ny afindrafindrao ary dia mandray anjara amin'ny fo avokoa ny olona. Na ny zaza aza dia efa mahay mihazakazaka maka namana handihy afindrafindrao koa.
Fa mazàna dia ilay feon-kiran'i Freddy Ranarison no manavanana antsika handihizana rehefa toa ireny. Haintsika anefa fa misy tonony ihany koa izy ka izay no mba tiako zaraina eto. Marihiko fa teo am-pihainoana ny afindrafindraon'i Clo Mahajanga no nahatonga ity tsirin-kevitro hizara ity. Tena tsy mba fantatro ny fisian'ny afindrafindraon'i Clo hatrizay, ary ataoko laharana voalohany mihitsy izy ity fa mba nahafinaritra ahy loatra. Manaraka ny azy dia tsy mety fa mbola ripaka be foana aho amin-dRajao.
Ireto 6 ireto aloha no hitako hatreto fa ampiako eto ihany aho raha mbola misy (aprily 2015)
5 janoary 2017 : mbola eto am-panamboarana Klipgasy ihany aho. Toa tsy vitako akory ilay hoe hiresaka momba ny zavatra voamariko fa toa tsy mety lany ilay izy fa tena mivoatra daholo na ny hira na ny fitaovana. Dia isan'izany ny fivoaran'ny afindrafindrao : tao ny kilalaky, dia tao koa ny gweta tamin'iny 2016 iny izay mety tsy ho tian'ny maro fa izaho manokana toa tsy tohina an.
CLO MAHAJANGA : "afindrafindrao tsy lavitra ity malesa..."
RAZILINAH (ataon'i Eric Manana) : "tavoahangy raha mihilana tohanako lantonoara, isekely raha mihilana tohanako lanto-tsandry moramora..."
LIZAH RASETA : "isika izao dia toa rano sy vary, na an-tsaha na an-tanàna dia tsy mifanary, izahay mihira sy mitehaka avy ety, ianareo kosa ery an-tany mandihy..."
TELO FANGADY : "any am-pandehanana any ianao dia hisedra fakam-panahy, aza hadino fa ny havanao mbola miandry manantena malala ô..."
RAJAO (Malok'ila) : "jereko ny sarinao tena tsara, vera eto, tavoahangy sy sigara, dia tena tsy fombanao ka lazao, ambarao..."
Afindrafindrao - Rajao - 2011-04-25 di Jaonari
OLADAD : "izay 'lay feon-kira iray hahafantaranay ny maha-gasy anay, tsisy mpanana io an, ary tsy nindramina io an, tsisy tsy mahalala an'io raha mbola Malagasy..."
BARINJAKA : "afindrafindrao io anaovanao gadon-kira : sega, zouk love, kilalaky..."
DA ROCHE sy JAYAH : "ataovy ny fandihy sexy, afindrafindrao gweta ny aty, ianao ato aloha somary midola, izaho ato aoriana manaraka mora..."
0 Hevitra | "Ny afindrafindrao tsy azo avela (updated)"